I-Winward Casino ukubuyekezwa okuku-inthanethi nokwamaselula 2021
Ikhaya / Amakhasino / isibuyekezo se winward casino kuselula naku inthanethi
Isibuyekezo se Winward Casino Kuselula Naku Inthanethi
Ibhonasi Lokukwamukela:750% Ibhonasi & 110 Imijikelezo
25 Imijikelezo engana Diphozithi
Abadlali bamageyimu baseNingizimu Afrika baneplatifomu yokuzijabulisa nephephile eWinward Casino. I-Winward Casino esungulwe ngaphambi nje kokuphenduka kwenkulungwane entsha yeminyaka, ingenye yamakhasino edijithali okuqala. Ayigcinanga ngokuhlolwa isikhathi, kepha futhi inerekhodi elisunguliwe. Ikhasino elithi ‘Mayelana Nathi libiza ukuthi’ manje banabadlali abangaphezu kwesigidi abavela emhlabeni jikelele ‘. Sicabanga ukuthi inani elilinganisekayo kumele livele eNingizimu Afrika
Isici esikhanga kakhulu sekhasino yilabhulali yemidlalo esezingeni eliphakeme futhi ehlukahlukene ehlinzekwa yizi-studio ezine eziphezulu zesoftware ezungeze. Lawa yiBetSoft, iPragmatic Play, iVivo Gaming, ne-Octopus Gaming. Imidlalo iqukethe ama-slots, imidlalo yamakhadi, i-roulette, i-video poker, ne-casino ebukhoma. IWinward Casino ibingelela amalungu amasha ngephakethe elihle lokwamukela imali engu-3, ​​bese igcina izinto zithakazelisa ngamaphromoshini ajwayelekile, imiqhudelwano eminingi nohlelo lokwethembeka.
I-Winward Casino inikeza indawo yemidlalo elinganayo nephephile. Akumangalisi ukuthi ijabulela ukwamukelwa yizinhlangano eziningi zezinja eziqaphile. Yonke imidlalo esekhasino ihlolwa njalo ngemiphumela ‘yamathuba’ ne-Random Number Generator (RNG), umthetho olandelwayo osemthethweni wemboni. Imininingwane yekhasino yezikhali ezibucayi ezinama-firewall abethelwe nge-128-bit. I-SA Rand ingenye yezimali ezisekelwa yi-crypto-friendly casino.
Amakhodi Wamabhonasi Wokwamukela Ka-2021 eWinward Casino
Idiphozithi Yokuqala Idiphozithi engu-200% Yomdlalo enemijikelezo engu 30 wokdlala
Idiphozithi Yesibili Idiphozithi engu 250% Yomdlalo enemijikelezo enu 50 Yamahhala
Idiphozithi Yesithathu Idiphozithi engu 300% Yomdlalo enemijkelezo engu 30
Amabhonasi ediphozi yomdlalo eza nesibopho sokubheja izikhathi ezingama-35 (ibhonasi kanye nediphozithi) zingakapheli izinsuku eziyi-7. Iya kusigaba samahhala se-Spins sekhasi lasekhaya ukuze ubone imidlalo ekhethiwe.
AmaKhodi AmaBhonasi Angadingi Diphozithi eWinward Casino ka 2021.
I-Winward Casino ayinikezeli ngamakhodi ebhonasi, kepha ihlinzeka ngama-spins wamahhala angama-25 lapho uvula i-akhawunti yakho. Noma yikuphi ukuwina okuvela kuma-spins amahhala kukhawulelwe ku-R2800, futhi lokho futhi ngemuva kokuthi ubheje ama-winnings ama-20 kungakapheli izinsuku eziyi-7. Kufanele ngabe wenze okungenani idiphozi eyodwa ukuze ufaneleke ukuhoxisa. Imidlalo yama-spins yamahhala ishiwo ekhasini lasekhaya ngaphansi kwesigaba esifanele.
Amanye Amaphromoshini Akhethekile Anikezwa yiWinward Casino
7 Amabhonasi eDiphozithi Nsuku Zonke.
(Inani lamabhonasi lingashintsha. Usayizi wamabhonasi uncike kwinani lediphozi).
Wonke amadiphozithi afinyelela ku-R686 eza nebhonasi efanayo engu-25%
Ibhonasi engu-50% yamalungu adipjozitha phakathi kuka-R700 no-R1036
Idiphoziti ka-R1050 kuya ku-R1386 iheha ibhonasi yediphozithi engu-75%
Ibhonasi engu-100% ilindele amalungu adiphozitha phakathi kuka-R1400 no-R2786
Amalungu adiphozitha u-R2800 kuya ku-R6986 angayengeza ngo-250%
Idiphoziti ka-R7000 kuya ku-R13986 ithola ibhonasi elingnayo engu-300%
Idiphoziti ka-R14,000 nangaphezulu iza nebhonasi elinganayo ka-350%
Khumbula isidingo sokudlala esingu-35x ibhonasi kanye nediphozi ezinsukwini eziyi-7 ngaphambi kokufuna noma yimaphi amabhonasi.
I-Winward Casino inikeza ibhonasi engu-400% yemadiphozithi nebhonasi elinganyo, uma udiphozithe ka-3 ngokulandelanayo nge Bitcoin, Litecoin, Ethereum, noma enye imali yedijithali. Lokhu kungafaka amadiphozithi wakho amathathu wokuqala wephakheji yokwamukela. Thenga eyodwa yalezi-crypto-currencies online, bese uyikhetha njengendlela yakho ye-e-banking. Yenza idiphozi futhi ibhonasi engu-400% izofakwa ngokuzenzakalela kubhalansi yakho
Ukuwina okuvela kule bhonasi nakho kuphethe imfuneko yokubheja engama-35x.
Ukwethembeka Ko kubuyiselwa imali
I-Winward Casino ibhalisa wonke amalungu amasha ohlelweni lokwethembeka ngokuzenzakalela, futhi ibenza bafaneleke ohlelweni lokuthembeka lokubuyisa imali. Ukubuyiselwa kwemali kokwethembeka kuyindlela yekhasino yokuvuza amalungu ngokudlala endaweni. U-15% wakho konke ukulahlekelwa kwakho kwamasonto onke kwesonto eledlule kubhalwe yiWinward Casino. Kodwa-ke, bekungamele ngabe wenze ukuhoxa kulelo sonto okukhulunywa ngalo, okusho ukuthi uphumelele.
Ukubuyiselwa kwemali kuza ngaphandle kwezibopho zokubheja.
I-Winward Casino inenqwaba yemiqhudelwano yansuku zonke neyamasonto onke. Abadlali kufanele babhalise, kwesinye isikhathi ngemali, ukuze badlale bancintisane nabanye ukuqoqa amaphuzu ezikhundla eziphezulu kumabhodi wabaphambili. Abaphumelele babelana ngamachibi emiklomelo emikhulu, futhi bangawina nemiklomelo yansuku zonke namabhonasi akhethekile ayingxenye yezikhuthazo.
Lokhu kufana nemincintiswano kodwa ngezinga elincane, kepha kusanikeza isisusa sokudlala. Kunabanqobi abathathu emjahweni ngamunye; imiklomelo iqukethe imiklomelo yemali kanye nama-spins wamahhala.
Uhlelo Lokuthembeka neVIP Club
IWinward Casino ifaka uhlelo olujwayelekile lwemivuzo; amalungu anikezwa amaphuzu okuthembeka kudiphozi ngayinye; amaphuzu ayaqoqeka kuze kube yilapho amalungu esekwazi ukujoyina i-VIP Club. Amaleveli anemikhawulo yamaphuzu andayo, ngakho-ke lapho amalungu edlala ngokwengeziwe, angakhuphuka phezulu esigungwini sabaphathi be-VIP, futhi namalungelo athe xaxa abawatholayo njengamabhonasi akhethekile, izimemo zemiqhudelwano ye-VIP yokufinyelela emicimbini ye-VIP e-bespoke, njll.
IVIP Club inamazinga ama-5: Isiliva, iGolide, iPlatinamu, iTitanium neMasters. Izinzuzo ze-VIP ziqala emazingeni ePlatinamu naseTitanium; lokhu ukukhushulwa kwe-VIP kanye nemincintiswano ekhethekile. Amalungu e-Master Club athola nomgcini wekhasino ozinikele, nezimemo zemicimbi ebalulekile. Uhlelo lokuthembeka lujezisa ukuhoxiswa: amalungu alahlekelwa amaphuzu ayi-2 okuthembeka nge-1 USD ngalinye (noma okulingana ne-ZAR) ahoxisiwe.
Ungangena kanjani futhi ubhalise ku-inthanethi eWinward Casino.
Izinkinobho ze- ‘Log In’ ne ‘Join Now’ zisesandleni sokudla phezulu kuwebhusayithi yeWinward Casino. Uma ungenayo i-akhawunti, chofoza ku-‘Joyina Manje ‘, bese uqedela inqubo yokubhalisa. Lapho uvula i-akhawunti yakho, uvumelana ngokuzenzakalela Nemigomo Nemibandela yekhasino.
Nakhu ukuthi wenza kanjani ngakho:
Chofoza ku-‘Joyina Manje ‘
Faka igama lokuqala / isibongo, igama lomsebenzisi, ikheli le-imeyili
Faka inombolo yesulula
Chofoza ku ‘Ngibhalise’
Uma usuvele unayo i-akhawunti, mane uchofoze ku- ‘Log In’, bese ufaka igama lomsebenzisi nephasiwedi oyikhethile ngesikhathi sokubhalisa. Lapho usufake ikhasi le-akhawunti yekhasino yakho, ungakhetha inketho yakho yokukhokha, wenze idiphozi, bese uqala ukudlala.
Imidlalo Yekhasino eku-inthanethi Ungayidlala eWinward Casino
Umtapo wolwazi wemidlalo kumele ube yingxenye ekhanga kakhulu eWinward Casino. Kunabahlinzeki be-software aba-4 kuphela – iBetSoft, iPragmatic Play, iVivo Gaming ne-Octopus Gaming. Kodwa-ke, zibalwa phakathi kokhilimu wemboni, futhi zenze ilabhulali yemidlalo esezingeni eliphakeme futhi enezinto eziningi ezibandakanya ama-slot, kufaka phakathi ama-jackpots aqhubekayo, imidlalo yamakhadi, izinhlobo ze-roulette, i-video poker, nemidlalo yabathengisi ebukhoma.
Ungapheqa kuma-lobbies ekhasini lasekhaya, noma uye ngqo endaweni yokwamukela izivakashi oyikhethile kusuka kuphaneli elingakwesobunxele. Ungase futhi uhlunge imidlalo ethile ngokusesha phezulu. Ngeshwa, ama-slots kuphela ahlukaniswa ngokuya ngabahlinzeki bemidlalo, kepha ngenhlanhla, yonke imidlalo ebonakalayo ingadlalwa ngemodi yedemo. Ake sibheke imidlalo ephezulu esigabeni ngasinye.
Amathili ama Slots ongawabona ngamehlo
Izikhala zakudala zinendawo yazo yokwamukela izivakashi, ekhombisa ukubaluleka kwazo. Kodwa-ke, ama-video slots aqukethe ingxenye yengonyama yomtapo wezincwadi futhi eza nezindikimba ezithandwayo ezifana nezinganekwane, inganekwane iWolf Moon Rising,
ISafari Sam 2, Thatha iBhange, iMore Gold Digging, i-Alkemor’s Tower, iNew Tales yaseGibhithe, iMiles Bellhouse kanye neGears of Time, iFruit Zen, i-Aladdin’s Magical Treasure, ne-Bamboo Rush, njll.
Ukuqoqwa Okuncane Kwemidlalo Yethebula
Eminye yemidlalo amathebula ayisigaba samakhasino, kepha iWinward Casino ayimele ngokuphelele uma kukhulunywa ngemidlalo yamakhadi. Kunemidlalo yetafula eyi-15, ikakhulukazi ukwehluka kwe-roulette ne-blackjack njenge-American Blackjack, i-European Blackjack, i-Double Exposure Blackjack, i-Blackjack Multihand, i-VIP European Roulette, i-VIP American Roulette, iRoulette Black Diamond, nesihloko se-Baccarat kuphela.
Imidlalo yomphakathi nge-Live Casino
I-Winward Casino ihambisane nezikhathi zanamuhla, futhi ifake imidlalo yabathengisi bukhoma kulabhulali yayo ngoba manje isiyisigaba esijwayelekile sekhasino. Ikhasino empeleni linokuhlangenwe nakho kwangempela kwekhasino okungu-19 kepha kuphela okungu-7 okutholakala kubadlali baseNingizimu Afrika. Lawa yi-Casino Hold ‘Em, i-Blackjack VIP, i-French Roulette, i-English VIP Roulette, i-Live Roulette, nokuhlukahluka okungu-2 ngaphezulu kwe-roulette ebukhoma.
I-Video Poker, i-Poker, nokunye
I-video ye-Winward Casino’s poker lobby ivele ikhokhele imilomo esigabeni. Indawo yokwamukela izivakashi ingxube yemidlalo ye-video poker kanye ne-poker ejwayelekile, kanye neminye imidlalo yamakhadi, njengePontoon neThree Card Rummy. Izinhlobo ze-Video Poker zifaka phakathi, ama-Jacks noma ama-Better, ama-Deuces Wild, ama-Deuces ne-Joker, ne-Joker Poker. Imidlalo emi-2 efanelekile ye-poker yi-Triple Edge Poker ne-Oasis Poker.
Igugu lamaJackpots aqhubekayo
Ama-jackpots aqhubekayo atholakala endaweni yokwamukela izivakashi futhi angabonakala ngelebuli ebomvu nenani layo lamanje. Isikhwama esihlanganisiwe se-jackpot eWinward Casino singaphezu kwezigidi ezingama-70 ZAR ngesikhathi sokubhala. Le midlalo ifaka amaCharms namaClovers, Faerie Spells, Legend of the Nile, Reels of Wealth, Mr. Vegas, Dragon Kings, Treasure Room, Mega Gems, Treasure Room, ne-A Night in Paris, njll.
I-Winward Mobile Casino: I-Winward Casino iqhathanisa kanjani neselula?
I-Winward Casino ilungiselelwe ngokuphelele ukudlala ngomakhalekhukhwini futhi ingafinyeleleka kuwo wonke amadivayisi wesimanje we-iOS ne-Android. Isakhiwo siyefana nesikhulumi se-PC, ngaphandle kokuthi iphaneli elingakwesobunxele lifingqiwe kumenyu ye-hamburger futhi labekwa phezulu ngakwesokunxele. Ngaphandle kokuchofoza okwengeziwe, ukuzulazula akunamthungo njengasekhasino le-PC. Ngisho nemidlalo ilayisha ngokushesha. Konke okudingayo ukuxhumeka kwe-inthanethi okuthembekile.
Iningi lamageyimu weselula anokuhleleka kwe-lateral, futhi adlalwa kahle kumodi ye-landscape. Eminye yemidlalo eshisayo ongayidlala usohambeni ifaka phakathi i-The Golden Owl yase-Athena, i-Quest ye-Minotaur, i-Fruit Bat Crazy, i-Caishen’s Arrival, i-Viking Voyage, i-Lucky Day emijahweni, i-Yak, i-Yeti, ne-Roll, i-Dwarven Gold, iMadder Scientist, iSpinfinity Man, iTransylvania, kanye nabathakathi uCauldron, njll.
Ngingayidawuniloda iWinward Casino kuselula yami?
I-Winward Casino ayinikezi uhlelo lokusebenza leselula noma le-PC yekhasino. Ikhasino ifinyeleleka ku-inthanethi kuphela kusakhiwo esisekelwe kusiphequluli, ukudlala ngaso leso sikhathi.
Izindlela Zokuhoxa Zemukelwa eWinward Casino
Bitcoin Yebo Okusheshayo
Ethereum Yebo Okusheshayo
Litecoin Yebo Okusheshayo
Bank/Wire Transfer Yebo Izinsuku 3-5
Izindlela Zediphozithi Zemukelwa eWinward Casino
I-Winward Casino Inhlangano Nemininingwane Yokuxhumana
Yasungulwa: 1999 Inombolo yamahhala ye-SA: Cha
Isetshenziswa ngu: Blacknote Entertainment Group Ltd E-mail: [email protected]
Ilayisensi: Uhulumeni waseCosta Rica Ingxoxo Esheshayo: Cha
Ubuhle Nobubi be-Winward Casino
Umtapo wolwazi wemidlalo ehlukahlukene kusuka kuma-studio aphezulu Imbalwa imidlalo yetafula
Iphakethe lokwamukela elihehayo Zimbalwa izihloko ze-poker video
Imijikelezo Yamhhala engadingi diphozithi Ayikho ingxoxo ebukhoma
Ukukhushulwa njalo nohlelo lwe-VIP
Imidlalo ebukhoma ye Dealer
Acebile, ama-jackpots aqhubekayo
Yamukela futhi ikhokhele nge-SA Rand
Yini Eyenza I-Winward Casino Ikhethwe futhi Idume Kubadlali BaseNingizimu Afrika?
Umtapo wolwazi ocebile futhi ohlukahlukene ovela kubahlinzeki abaphezulu
Iphakethe lokwamukela elihle elingenayo idiphozi nomjikelezo wamhhala
Amakhasino abukhoma nama jackpots aqhubekayo
Amakhasino athengiselana nge-SA Rand
Izikhalazo ze-Winward Casino yase Ningizimu Afrika
Imidlalo yetafula embalwa
Izihloko ze Video-poker ezimbalwa
Ayikho ingxoxo ebukhoma
Ngabe iWinward Casino Casino isemthethweni eNingizimu Afrika?
Ukugembula ku-inthanethi akuvunyelwe eNingizimu Afrika. Kodwa-ke, iziphathimandla azinamandla okuphatha ezikhungweni ze-iGaming ezingasogwini, futhi azibhekisi izakhamizi zayo ngokudlala ezindaweni zazo.
Ngikhipha Kanjani Imali Ku-Winward Casino?
Iya kusigaba se-cashier bese uqhafaza esiteshini sakho sokukhokha osithandayo bese ufaka inani ofuna ukulikhipha. Uma usuqondiswe kabusha ekhasini lomhlinzeki wakho wesevisi yokukhokha, faka imininingwane yakho yokuvinjelwa bese uyithumela. Isikhathi esithathwayo ukuwina kwakho ukufinyelela ebhange lakho sincike esiteshini sokukhokha.
Yini iWinward Casino?
I-Winward Casino iyikhasino yedijithali esebenza ngokugcwele enikeza uhla lwemidlalo yokuthengisa ebonakalayo yamalungu azowadlala ngemali yangempela.
Ubani Ophethe i-Winward Casino?
I-Winward Casino iphethwe futhi iqhutshwa yiBlacknote Entertainment Group Limited, inkampani ebhaliswe eCosta Rica.
Ingabe i-Winward Casino inezici zokubheja kwezemidlalo
Cha, iWinward Casino ayinayo incwadi yezemidlalo.
Ingabe iBets724 Casino Inikela ngohlelo lwe-VIP?
I-Winward Casino ifaka uhlelo lokuthembeka ne-VIP Club.
Ziyini Izidingo Zokubheja e-Bets724 Casino?
Ukunqoba kwama-spins mahhala kufanele kubhejwe amahlandla angama-20 ngaphambi kokuthi kuhoxiswe. Ngokuphinda ulayishe amabhonasi, inani lebhonasi kanye nediphozithi kufanele lidlalwe izikhathi ezingama-35 ngaphambi kokuthi noma yikuphi ukuwina kungakhishwa.